Avy Any Harbin Ka hatrany Shenyang, Fampatsiahivana Ny Fitsipika Mavesatry ny Fanjakan’i Japana Tao Avaratra-Atsinanan’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2016 3:18 GMT
Topimaso mampiseho ny fampidirana am-ponja an'i Puyi (溥儀), amperora farany tao Shina, tao amin'ny Fonjan'i Liaodong No. 3 (Fushun) ao Harbin. Sary avy amin'ny mpakasary Lu Gang avy ao amin'ny Masoivohom-baovao Xinhua.
Ny Fikambanan'ny Mpampianatra ao Ichinomiya, amin'ny alalan'ny kaonty Twitter iraisana izay sahanin'ny mpikambana ao amin'ny biraonà Fikambanana iray any amin'ny tanàna kely iray ao amin'ny manodidina an'i Nagoya, dia nandefa bitsika mahaliana avy ao an-tanànan'i Harbin, ao avaratra atsinanan'i Shina.
Mpiasa amin'ilay fikambanan'ny mpikarakara fialantsasatra ao avaratra atsinanan'i Shina no naka sary ny maritrano japoney tamin'ny faha-zanatany sy ireo fampatsiahivana hafa ny ady naharitra notanterahina tany Shina hanoherana an'i Japana tamin'ny taona 1930 sy 1940.
Ny sasany amin'ireo sary miavaka indrindra navoaka tao amin'ilay fàhana dia avy any amin'ilay fonja fantratra amin'ny hoe Foibe Fushun Fitantanana ireo Jiolahy an'Ady.
Ny fonja ao Fushun dia nitazona Japoney mpitantana teo amin'ny 1.000 teo avy any Manchuko, ilay fanjakan-tsaribakoly natsangana niaraka tamin'ny fanohanan'ny Japoney tao avaratra atsinanan'i Shina tamin'ny 1932.
Puyi (溥儀), ilay amperora farany tao Shina, dia napetrak'i Japana h toy ny mpanjaka araky ny lalàm-panorenan'ny mpanjaka tokana nanomboka ny 1932 ka hatramin'ny 1945 ary nogadraina tao amin'ny fonjan'i Fushun niaraka tamin'ireo Japoney mpitantana sy mpitari-tafika noheverina ho jiolahy an'ady.
Raha toa ka milaza ny sasany amin'ireo mpitsikera fa ny jiolahy an'adin'i Japana izay voafonja ao Fushun dia “voasasa atidoha” avy amin'ny Antoko Kaominisita Shinoa, ny fijoroana vavolombelona am-bavan’ireo gadra tenany dia nanamafy fa ny fanarenana no tena nifantohana ary ny fiaikena ny heloka manoloana ny olombelona vitan'ny tafika Japoney nandritra ny ady naharitra fianaovany tamin'i Shina, izay nanomboka niaraka tamin'ny fananiham-bohitra tao Manchuria tamin'ny 1931 ary nitohy mandra-paharesy an'i Japana tamin'ny 1945.
Ireo bitsika avy amin'ny kaontin'ny Fikambanan'ny Mpampianatra ao Ichinomiya no maka ny sasantsasany tamin'io fihetsehampo io.
Japoney jiolahy an'ady voatàna ao amin'ny fonjan'i Liaodong No.3 (Fushun) taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Hosodoko nataon'ny Japoney POW .
Nandritra ny dian'izy ireo tany amin'ny avaratra atsinanan'i Shina, ny olona niandraikitra ny kaonty Twitter an'ny Fikambanan'ny Mpampianatra ao Ichinomiya dia nahita fa mbola feno porofo betsaka mikasika ny fitondrantena Japoney nandritra ny ady ao avaratra atsinanan'i Shina.
Toerana nisehoan'ny famonoana faobe Pingdingshan. Misy satroboninahtra eto avy amin'ny Masoivohon'i Japana ao Shenyang, ary niaiky tamin'ny fomba ofisialy ny fanjakana Japoney fa nisy tokoa ity (habibiana) ity.
Raha toa ka tsy isalasalana fa nampiasaina ho fandaharan'asa politika ny tranombakoka ao Fushun, mihetsika ireo fampiratiana ary mamelona andiana olona matetika antsoina hoe ”Japoney Jiolahy an'Ady .”
Ny lehiben'ny mpiasam-panjakana faha-zanatany, Takebe Rokuzo, dia nitomany rehefa namaky ny didin'ny (fitsarana heloka bevava) manameloka azy. Tsy nisy jiolahin'ady nahazo ny fanamelohana ho faty (tany Fushun).
Ny mpiasa avy amin'ny Fikambanan'ny mpampianatra ao Ichinomiya ihany koa dia nanatri-maso ny iray tamin'ireo zava-nitranga maro nalaza ratsy nataon'i Japana nandritra ny ady tany Shina.
Unit 731 no anaran'ilay toerana ao avaratra atsinanan'i Shina izay nitarihan'ny tafika Japoney fanandramana ara-pitsaboana mampihoron-koditra tamin'ireo gadra Shinoa.
Ny sisa tavela tamin'ny Unit 731.
Ireo bitsika hafa dia manome topimaso, tsy hoe fotsiny tamin'ny fotoana izay niezahan'i Japana hanjanaka an'i Manchuko, fa ihany koa ny vanim-potoan'ny herin'ny dindo Rosiana tao avaratra atsinanan'i Shina.
Ireto misy sary sasantsasan'ny Katedraly Saint Sophia ao Harbin, vita tamin'ny 1932, fony foko Rosiana ny iray ampahatelon'ny mponina tao Harbin:
Katedraly Saint Sophia
Manana fifamatorana mafy amin'ny Saikinosin'i Korea ihany koa ny faritra:
Trano fisakafoanana Pyongyang, Harbin
Manarik'azy i Shenyang, ny tanàna lehibe indrindra ao avaratra atsinanan'i Shina.
Fantatra amin'ny hoe Mukden io tanàna io nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany Japoney ary lehibe ara-barotra tamin'izany ary orinasa ao Manchuko. Maro ireo tranobe tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany no tavela.
Sampana fahinin'ny Orinasa Fampandrosoana Tatsinanana tao Shenyang .
Sampana fahinin'ny Bankin'i Korea tao Shenyang.
Foiben'ny polisy Shenyang teo aloha (tamin'ny fitondrana fanajanahatany Japoney).
Yamato Hotel fahiyn tao Shenyang.
Sarotra ny hanamarina, fa mety hoe ireo ve no fonenan'ny Japoney mpanjanaka taloha ?
Biraon'ny Paositra taloha tao Shenyang. Naorina teo amin'ny 100 taona lasa izay.
Ny fitetezam-paritra sy ny bitsika dia manarona an'i Kingdao, manerana ny ranomasin'i Bohai ka hatrany amin'ny ho eo antsimo andrefan'i Shengyeng sy Harbin.
Zanatany Alemana fahiny talohan'ny nitakian'i Japana azy, malaza noho ny labierany atao amin'ny fomba Munich i Qingdao: